खुट्टा तान्ने आफै चिप्लिन्छन् – Yug Aahwan Daily
खुट्टा तान्ने आफै चिप्लिन्छन्
युग संवाददाता । १९ असार २०७७, शुक्रबार १०:४१ मा प्रकाशित
1563 पटक हेरिएको
हरेक व्यक्तिको जीवन संघर्षमा आ–आफ्नै भोगाइ र अनुभव हुन्छन् । व्यक्तिको जीवन संघर्षभित्र प्रेरणा, पीडा र अवसरका कथा लुकेका हुन्छन् । चाहे त्यो जो सुकैको होस् । जीवन संघर्षको दौडानमा कतिपय सफल हुन्छन्, त कतिपय असफल पनि । तर जीवन संघर्षको दौडानमा आफुले गरेको मेहनतबाट प्राप्त प्रतिफल सबैलाई प्यारो र मिठो लाग्छ । यस्तै जीवन संघर्षका क्रममा मध्ययमवर्गिय परिवारमा हुर्केर मध्यपश्चिम विश्व विद्यालयका उपकुलपती बन्न सफल प्राणी शास्त्री प्राडा नन्दबहादुर सिंहको अनुभव हामीले यूगआह्वानको जम्काभेटमा समेटेका छौं ।
मेरो जन्म २०२२ साल असार १ गते महाबै गाउँपालिका–४, डिल्लीकोट कालिकोटमा भएको हो । म गाउँमै मध्ययम वर्गिय परिवारमा जन्मे र गाउँमै हुर्के । गाउँकै स्कुलमा पढेँ । त्यती बेला अहिलेको जस्तो सजिलै कापी, कलम पाइदैन थियो । खरी र पाटी झुण्ड्याएर पढ्नु पथ्र्यो । अहिले जस्तो गाउँमा विद्यालयको भौतिक संरचना पनि थिएन ।
खुला चौरमा बसेर पढ्थौं । पानी पर्दा दिउसै दौडेर घर आउनु पथ्र्यो । त्यती खेरको एउटा कुरा मलाई अहिले पनि सम्झना आउँछ । हामी घर बाट स्कुल जादाँ र घर फर्किदा सँधै त्रासले आउजाउ गथ्र्यौ । किनकी बिचबाटोमा एकजना आफन्तले कुकुर पालेका थिए । त्यो कुकुरले हामीलाई सधँै लखटेर हैरान पाथ्र्यो । भागौ भने टोक्ने डर नभागौ भने मनदेखि त्रास हुन्थ्यो । म डरले काँप्थ्ये । त्यो बेला निगालाको कलम बनाएर मसी भरी लेख्थ्यौं । त्यसरी पढ्दै गर्दा म कक्षा १ मा टप भएँ । मलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सम्मान स्वरुप कापी उपहार पठाइ दियो । त्यो क्षण मेरो लागि निकै खुसी कुरा थियो । किनकी कापीमा लेख्न पाइने भयो, भनेर मनमा खुसीको सिमा नै थिएन ।
सम्झनामा भोगाइका अनुभुती
मेरो घरमा खासै खान लगाउन समस्या थिएन । २८ सालमा दैलेख जिल्लामा भोकमारी पर्दा मेरो घरले अन्न बेच्थ्यो । म आफैले घरमा उत्पादीत अन्न बोकेर दैलेख सदरमुकाम ल्याएर बेचेको याद छ । खेतबारीमा मल बोक्दाको याद अझँै ताजा छ । गाई भैंसी चराउनेदेखि हलो जोत्दै स्कुल धाउँथे । घरमा अभाव नभए पनि गाउँले जीवन घरायासी काम नगरी सुखै थिएन । पछि मेरो घर परिवारलाई कम्यूनिष्ट भनेर प्रहरीले दुख दिन थाले । गाउँमा अन्य कुनै कारणले मान्छे मर्दा हाम्रो परिवारले मारेको हो, भनेर झुट्टा मुद्दा लगाइयो । त्यसैकारण अनावश्यक दाईले दुख पाउनुभयो । तर पछि कारण पत्ता लागेपछि हामीलाइ फसाउन पाएनन् ।
कक्षा ५ बाट म दैलेख सदरमुकाममा आएर पढ्ने योजना थियो । तर विभिद कारणले कक्षा ८ बाट मात्रै दैलेख सदरमुकाम आएर कक्षा १० सम्म पढ्न पाएँ । म परीक्षामा कहिल्यै फेल भइन । सधँै अग्र स्थानमा परीक्षा उतीर्ण हुन्थे । मैले एसएलसी परीक्षा दिदा मसँगै दुई सय ५६ जना परीक्षामा सहभागी थिए । तर म बाहेक अरु कसैले त्यो व्याजको एसएलसी उतीर्ण गर्न सकेनन् । एसएलसीपछि म अध्ययनको शिलसिलामा काठ्माडौं थिएँ । मेरो बुवा गाउँको प्रधानपञ्च समेत हुनुहुन्थ्यो ।
संघर्ष गरे सफलता सम्भव
एसएलसी पास भएपछि काठ्माडौमा गएर आईएसी अध्ययन गरेँ । बीएसी, एमएसी टप हँुदै मैले धेरै भाषाको बिषयमा पनि अध्ययन गरेको छु । शिक्षा, मानविकी, कानुन, मेडिकल स्वास्थ्य संकायमा पनि मैले अध्ययन गरेको छु । मान्छेले कुनै क्षेत्रमा ज्ञान विना उपलब्धी हाँसील गर्न सक्दैन । म अहिले पनि ज्ञान लिदै छु । म पढ्दै गर्दा के गर्ने के बन्ने भन्ने कुरामा खासै चासो दिइन । जति सकिन्छ धेरै ज्ञान हाँसील गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो । पढ्दै जाँदा मैले जापानबाट जीनोलिष्ट साइन्स पनि अध्ययन गरेँ ।
मानव उत्पतीबारे मलाई सानैदेखि खुबै उत्सुकता थियो । यस बिषयमा अध्यन गर्दै बैज्ञानिक बन्ने इच्छा पनि हो । कुनै पनि वस्तुको जीवन काल र गुण परिवर्तन सम्भव छ, छैन ? भन्ने बारे जान्न चाहन्थे । पछि अध्यन गर्दैगर्दा थाहाँ पाएँ । त्यो सम्भव पनि रहेछ । मलाई यो बिषय पढ्दा आत्म सन्तुष्टी मिलेको छ । अहिले एउटा विश्व विद्यालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छु । जीवन संघर्षको क्रममा मेरो अनुभव, भोगाइ र ज्ञानका कारण आज म जुन ठाउँमा छु । निकै सन्तुष्ट छु ।
सेवामा चलेको दैनिकी
म सबैभन्दा पहिले मेरो स्वास्थ्ययलाई माया गर्छु । अनी म ठिक भएसम्म मेरो घरपरिवार, समाज र देशका लागि सेवा गर्ने प्रण गर्दछु । सबैभन्दा पहिलो कुरा म विहानै ४ देखि ६ बजेको बिचमा उठ्छु । नियमित १÷२ गिलास तातोपनी खान्छु । त्यसपछि ब्रस गर्ने, रेष्टरुम जाने र योगा गर्ने गर्दछु । योगापछि मेरो काम सुरु हुन्छ । दिनभर काममा व्यस्त हुन्छु ।
प्राय रातीको १२÷१ बजे सुत्छु । ४÷५ घण्टा मात्रै मेरो सुताई हुन्छ । मलाइ लाग्छ, खुट्टा तान्ने आफै चिप्लिन्छन् हरेक व्यक्तिको जीवन संघर्षमा आ–आफ्नै भोगाइ र अनुभव हुन्छन् । व्यक्तिको जीवन संघर्षभित्र प्रेरणा, पीडा र अवसरका कथा लुकेका हुन्छन् । चाहे त्यो जो सुकैको होस् । जीवन संघर्षको दौडानमा कतिपय सफल हुन्छन्, त कतिपय असफल पनि । तर जीवन संघर्षको दौडानमा आफुले गरेको मेहनतबाट प्राप्त प्रतिफल सबैलाई प्यारो र मिठो लाग्छ ।
आफ्नो, समाज र देशको कल्याणका लागि काम गर्न सक्नुपर्छ । अधिकांश समय मैले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको काम गर्दै समय बिताइरहेको छु । विश्व विद्यालयको शिक्षा अनुसन्धान मुलक र व्यवहारिक बनाउने मेरो प्रण छ । आवश्यक भौतीक संरचना निर्माणका कामदेखि विश्व विद्यालयका सम्भावनाको खोजी गरिरहेको छु । मेरो कार्यकालमा विश्व विद्यालयलाइ सबैले वाह वाह भन्ने काम गर्ने योजना छ ।
सहयोगी र प्रेरणाका स्रोत
जीवन संघर्षको दौडानमा मेरो परिवारले मलाई सबै भन्दा धेरै साथ सहयोग गरेका छन् । मेरो शिक्षाका प्रेरणाका स्रोत मेरो आदरणीय दाई प्रेमबहादुर सिंह हुन् । म विश्व विद्यालयको उपकुलपती हुदाँसम्म मलाई साथ सहयोग गर्ने सबैप्रति नमन छ । उपकुलपती हुनु पूर्व पनि म आर्टीकल लेख्ने, अध्ययन गर्ने लगायतका धेरै काममा व्यस्त नै हुन्थ्येँ । त्रिविको धेरै कमिटीमा रहेर पनि काम गरेको छु । सहयोग र प्रेरणाको कुरा गर्दा सानैमा गाउँबाट दैलेख सदरमुकाम अध्ययन गर्न आउँदाको मलाई याद आयो । त्यो बेला गाउँका सबै आफन्तले घर खर्चका लागि बचाइ राखेको थोरै थोरै पैंसा मनाई नासो दिन्थ्ये ।
किनकी भविष्यमा मलाई धेरै प्रगती गरोस् र गाउँको सेवा गरोस् भन्न्ने आफन्तको सोचाइ थियो । तर अहिले ती दिनहरु सम्झीदा आफन्तको लागि ऋणी महशुस हुन्छ । जती सेवा गरे पनि उनीहरुका लागि अँझै केही गर्न नसके झैँ अनुभुती हुन्छ । अब आफ्नो ठाउँ, प्रदेश बनाउने हो । मेरो परिवारमा मेरा आठ भाइ, बहिनी थिए । दिदीहरुले पढ्न पाएनन् । निकै दुखले बाबा, आमाले हामीलाइ पढाउनुभयो । त्यसको ऋण तिर्न पनि मैले अब समाज सेवा गर्नैपर्छ ।
म विश्व विद्यालयमा आउँदा पनि सबै दल र व्यक्तिबाट साथ पाएको छु । अब विश्व विद्यालयको जनशक्ति सजिलै बजारमा खप्ने खालको उत्पादन गर्ने अभियानमा छु । मैले विश्व विद्यालयलाई मेरो छोरो सम्झेको छु । यसलाई असल अभिभावकत्वको रुपमा आफ्नो भुमिका निभाउने छु । मेरो अबको योगदान नै यसको संरक्षणका लागि हुनेछ । एमयूको एक पैंसा पनि भ्रष्टचार गर्नेलाइ तह लगाइने छ ।
धेरै मेरा साथीहरु मभन्दा माथी पनि छन् । त कतिपयले धेरै दुखको जिन्दगी पनि बिताइरहेका छन् । मेरो प्रगतीमा पनि डाहा गर्ने र खुट्टा तान्ने होलान् । तर खुटटा तान्ने आफै चिप्लिन्छन् । आफुले आफ्नो रप्तार छोड्न हुन्न । सकारात्मक कामका लागि अघि बढ्नुपर्छ । दर्शन र चिन्तनका लागि सधँै एक मन लाएर काम गर्ने गर्दछु ।
इमान्दारी भएर काम गर्ने हो भने एक दिन पक्कै पनि जो सुकैको मुल्यांकन हुन्छ । व्यक्ति नबिग्रौँ आचरण ध्वस्त नपारौं । समाज र देश परिवर्तन गर्न सकिन्छ । धेरै कुरा गरेर अब नागरिकले विश्वास गर्नेवाला छैनन् । अब काम गर्ने बेला हो । एक व्यक्तिको भुमिकाले देशमा लोडसेडिङ्ग हट्छ, भने अब के एक व्यक्तिको भुमिकाल मध्यपश्चिम विश्व विद्यालयलाई देशकै एक नम्बरमा बनाउन सकिदैन र ? म त्यही भुमिका निभाउन लागिपरेको छु ।
सबै निकायसँगको समन्वयमा एमयूलाई सुधार्ने अभियानमा छुँ । यसका लागि रातदिन नभनी काम गरिरहेको छुँ । म जस्तो विश्व विद्यालयको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भएका गाउँमा धेरै बालबालिका छन् । तीनै बालकालिकालाइ आफ्नै ठाउँमा उच्च शिक्षा हाँसील गरी गाउँठाउँको सेवा गर्ने मौका दिने अबको रणनीति हो ।
(२०७७ असार १९ गते आइतबार युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)
1 thought on “खुट्टा तान्ने आफै चिप्लिन्छन्”
Really, it isavery nice sketch of your life, Prof. Dr. Nanda Singh Thakuri sir . your childhood seems so memorable and your education of the time is smooth. Your higher education from Kathmandu to Japan is glorious and inspiring. Your glorious designation as the Vice-Chancellor of the Mid-Western University, Surkhet is greatly deserving and all welcome !Your ardent belief of sliding away in themselves to those who drag the legs of others is all convincing one. One person can, no doubt, change the whole world. Your cherished desire to make this universityagreat academic hub too is quite possible. The only need for it is to have your right labor with your all might and farsightedness and to choose the equally right laborers to support you in this grand mission. ( your heart with this grand designation is leaden andasmall stone can easily break it. Be aware of it too in time !)